Rine Simba Kunamata Munguva Yekusuwa Yekushaiwa | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Rine Simba Kunamata Munguva Yekusuwa Yekushaiwa
Rine Simba Kunamata Munguva Yekusuwa Yekushaiwa
Nhasi tichave tichitarisana nemunamato une simba munguva yekushayiwa kwekuda. Pane dzimwe nguva muhupenyu hwedu dzatichava mune zvakanyanya mamiriro akaoma. Munguva iyi, zvinoratidzika sekunge zvinhu zvese zviri kutirwisa. Zvakakosha kuti ugare uchiziva, kunyanya panguva ino, kuti isu tiri mudutu rehupenyu kuti Mwari achiri nesu, uye anogara akagadzirira kutinunura kubva panguva dzino dzakaora. Zvese zvatinoda kuti tiite zvinowedzera hupenyu hwedu hwekunamatira.
Zvisinei, tinofanira kunzwisisa kuti zvakaoma zvikuru kuona Mwari mudutu, asi hazvireve kuti Mwari haasi kutiteerera.
Mweya waMwari wakandiudza kuti Mwari anoda kununura vanhu vazhinji kubva panguva yakaoma, uye anoda kununura vanhu kubva mumatambudziko. Ndosaka ndakatungamirirwa nemweya waMwari kunyora chinyorwa ichi. Kunyangwe isu tichinzwisisa kuti munamato inzira yekutaurirana pakati pevanhu venyama nevasingafi, minamato ine simba munguva yekushaya kwekushayiwa ndeimwe yezvinhu zvatinoda kuti tibude mumamiriro ezvinhu ane njodzi. Nyaya yaJacob inotidzidzisa zvinoitwa neminamato ine simba, kunyanya munguva dzekutambudzika. Isau angadai akabudirira kutsiva kunaJakobho dai Jakobho asina kumira zvine mutsindo panzvimbo yemunamato husiku. Jakobho aiziva zvechokwadi kuti hupenyu hwake huri munjodzi kana Esau akasangana naye kutanga asangana naMwari.
Bhaibheri rakanyora kuti Jacob akarwa nemutumwa kuti zita rake rishandurwe.
Panguva iyi, Sungano yaMwari Sungano yekubudirira yakanga iri pamusoro pehupenyu hwaJakobho; zvisinei, aisakwanisa kuzadzisa icho chinangwa nekuda kwekunetsa kwehupenyu. Jakobe akaneta nemamiriro ezvinhu uye akafunga kusangana naMwari pakati pehusiku. Kusangana kwakaitika pakati paJakobho neMutumwa kwainge kwakawanda mumuviri nepamweya panguva imwechete. Kunyange zvingaite sekuti Jacob airwidzana nemutumwa, kukurukurirana kwakakosha kwaive kuri kuitika munzvimbo yemweya panguva iyoyo kurwa kwaive kuri. Muhupenyu hwedu zvakare, pane dzimwe nguva dzatinofanira kuneta nemamiriro ezvinhu akaoma isu tisati tasimudzirwa mumweya kuti tipe munamato une simba wekununurwa kwedu mumamiriro akadaro.
Chinyorwa ichi chinokupa iwe unodikanwa, munamato une simba kuti uzvinunure pachako munguva. Ini ndinotema kuti sezvaunotaura minamato inotevera, maoko aMwari achauya pamusoro pako. Iwo mweya werusununguko, iro simba rorusununguko kubva kuna Mwari Wemasimbaose richauya pahupenyu hwako, uye nerubatsiro urwo rwaunoda kuti ubve mumamiriro iwaya huchauya pauri izvozvi muzita raJesu.
Ishe wehondo, mutsvene weIsreal, ndinouya pamberi pako nhasi nekuda kwekurwadziwa kwakashata nekurwadziwa kwehupenyu kwandakazviwana ndiri. Ndiri kuda chaizvo kuporeswa ndisati ndarasika ini pakurwadziwa uku, Jehovha Mwari, ndinonamata kuti musimuke muite izvo zvoga zvamunogona kuita muzita raJesu. Baba vari Kudenga, simuka nhasi uite shura rako muhupenyu hwangu. Ndimi murapi wechishamiso. Ndiwe une simba weIsreal, iwe Mesia une bharisamu inozorodza kupodza maronda ese. Ndinonamata kuti umuke nhasi urape kukuvara kwangu muzita raJesu. Rugwaro rwacho rwakaita kuti ndinzwisise kuti Kristu atora paari hutera hwangu hwese, uye akarapa zvirwere zvangu zvese. Ndinoraira kupodzwa kwako pahupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti kudzimwa kwezvikwereti zvangu. Sezvo Kristu akadzima chikwereti chedu chechivi neropa rake rinokosha. Ini ndinotema nemvumo yokudenga kuti iwe uchamuka nhasi uye undibatsire kugadzirisa zvikwereti zvangu zvese muzita raJesu. Rugwaro runoti Mwari wangu achandipa zvese zvandaida maererano nehupfumi hwake mukubwinya kubudikidza naJesu. Sezvakarehwa neshoko, ini ndinosimbisa musungano yeshoko iro pamusoro pehupenyu hwangu. Ini ndinotema kuti zvido zvangu zvinotarisirwa muZita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nedhimoni roga roga rinonzi Kushaya. Ndinozviparadza pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu. Handizoshaye chinhu chakanaka muhupenyu hwangu. Ndinonamatira kupiwa kwechinhu chakanaka chose muhupenyu hwangu muzita raJesu.
Baba Ishe, ndinouya kuzopesana nemweya yehurombo hwese pamusoro pehupenyu hwangu. Simba rese rakapika kupa simba rangu rese risingabatsiri. Simba rega rega rakapika kuparadza basa rangu rakaoma, ini ndinosarudza kuti vanopedzwa nemoto nemuzita raJesu. Rugwaro rwacho haruzive rweanoda kana anomhanya, asi ndiMwari unonzwira ngoni, ndinonamata kuti ngoni dzako dzive pahupenyu hwangu muzita raJesu.
Nekuti iwe wakati pashoko rako kuti unonzwira tsitsi uyo waunonzwira tsitsi, uye unonzwira tsitsi Ishe Mwari, pakati peavo muchaitira tsitsi, pakati peavo imi muchakomborera zvikuru Ishe mundive ndakafanira muzita raJesu.
Baba Ishe, musimboti werufu rwaKristu kuparadza sungano yakare nekutipinza musungano itsva yetsitsi. Tenzi, sungano yese yakaipa muhupenyu hwangu, chisungo chese chemadhimoni chandakagara nhaka, ndinovaparadza muzita raJesu. Ini ndakakosha muropa rakakosha raKristu rakadeurwa pamuchinjikwa weCalvari, uye ndinotema nesimba rematenga kuti sungano yakaipa pamusoro pehupenyu hwangu yaparadzwa muzita raJesu. Sungano Yakashata iyo yaiti handibudirire, sungano yakaipa iyo yakavimbisa kutapudza hupenyu hwangu ipfupi nenzira iyo yavakaitira vanhu vari pamberi pangu, baba vekudenga, Mwari asingakundikani sungano yake, une sungano yerunyararo uye runyararo rwehupenyu hwangu. Wati unoziva mifungo yaunayo kwandiri, ipfungwa dzakanaka uye kwete dzezvakaipa kuti undipe magumo anotarisirwa. Ishe, pasungano iyi, ndimire apo ndinoparadza zvirongwa zvese zvakaipa pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana nechero maitiro angangoita kuti ndiende kujeri, uye ndinozviparadza muzita raJesu. Ishe ndinonamata kuti musimuke mundireurure muzita raJesu.
Previous nyayaHondo dzeMweya Minamato Yekurwisa Vavengi
inoteveraMinamato Yemangwanani Kuti Utange Zuva Rako Na Mwari
Kiganane joginder Gunyana 7, 2020 At 2:34 am
Minyengetero yekuhwinha mweya yaJesu Kristu humambo
Kiganane joginder Gunyana 7, 2020 At 2:42 am
Muranda waMwari minamato yako yakabatidza moyo wangu uye tariro yezvakawanda.
Kukomborera samuel Nyamavhuvhu 8, 2020 At 6:21 pm
Bummyla Ogwo Gunyana 10, 2020 At 2:17 am
Ndinokutendai Jesu Kristu! https://www.God.bingo
Chanda mukuka Gunyana 10, 2020 At 9:28 am
Dzimwe nyasha iwe zaruro unamate mapoinzi anobatsira kwazvo
Odogwu Celestine Zvita 24, 2020 At 6:16 am
20 MFM minamato Pfungwa Pokana Ancestral Chikwereti
Makumi makumi matanhatu eminamato yemunyengero mutsva